Trollduino: ...lọ ọrụ mmepe pụrụ iche nke Arduino | Akụrụngwa n'efu
Trollduino: a ... pụrụ iche Arduino osisi
Enwere ọtụtụ ọkwa gọọmentị na dakọtara Arduino. Enweghị ike agwụ agwụ maka ndị mmepe na-achọ isi iji malite ọrụ DIY ha. Ugbu a ndị na-eme ihe nwekwara ngwa ọrụ mgbakwunye ọhụrụ, ọ nwere aha mara ezigbo mma: trollduino. Ma ọ bụghị naanị ihe ijuanya banyere efere a yiri nke a Arduino UNO na nke ahụ na-eji otu ụdị ihe ahụ eme ihe.
Ma ọ bụrụ na ị na-eche ihe na-eme ka mmepe a bụrụ ihe pụrụ iche, nke bụ eziokwu bụ na ị ga-eleba anya na mgbawa ya. Mgbe nọ na Arduino na bọọdụ mmepe ndị ọzọ, ọ bụ microcontroller ma ọ bụ MCU, na ikpe Trollduino ọ bụ ihe a amara maka ngwa elektrọnik: ee, a mfe Oge 555.
Ma… chere, chere! Enwere ihe dị otú ahụ n'ezie? Ka anyị gaa n'akụkụ ụfọdụ. Dị ka ị maara, IC 555 bụ oge a ma ama nke nwere ọtụtụ ohere dị na DIY ụwa. Enwere ike ime nnukwu ihe na mgbawa a na ihe ole na ole ndị ọzọ.
Ya mere, mmadu (Nwayọọ Lee Nwere mmasị na Hackaday.io) si cyberspace wee na a Trollduino osisi "ebube". Wayzọ nke na-egbochi obodo Dị ka aha ya na-egosi. N'ime ya ọ na-atụ aro iji a Arduino UNO nke ejiri 555 timer dochie microcontroller ahụ, nke dị mfe karị, mana enwere ike iji ya mee ihe iji jikọọ akụrụngwa na ntụtụ ha na mmemme ụfọdụ ọrụ.
Ihe oyiyi ahụ dị adị, n'ime ha ị ga-ahụ etu o si tinye atọ atọ na nnukwu efere na ịke UNO. Na mgbakwunye, ụfọdụ ndị na-emegide ihe na ndị na-arụ ọrụ agbakwunye na bọọdụ mmepe ahụ, ọbụnakwa njikọ jaak na njikọ USB maka ike (ebe ọ bụ na ị ga-enwe ike ịchekwa obere data na 555 ...). Ma atụdo, dị ka ị pụrụ ịhụ na ọ na-dakọtara na Arduino UNO.
Y, ọ bụrụgodị na ọ bụ egwuregwu, eziokwu bụ na ọ nwere ike ịbụ ezigbo echiche maka ụfọdụ ndị mbido chọrọ ịmalite ịmalite ịrụ ọrụ na IC 555 n'ụzọ dị mfe. Ee, enwere nnukwu ike na otu a, mana ọ bụrụ na itinye ihe na-agbanwe agbanwe na ikike ị ga - eji ya rụọ ọrụ.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị, ị nwere ike budata atụmatụ ahụ ma lee ozi ndị ọzọ ebe a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Arduino » Trollduino: a ... pụrụ iche Arduino osisi
N'ezie, enwere oke oke ma e jiri ya tụnyere ohere niile nke 555 nyere (anaghị m ekwu abụọ ọzọ), mana dị ka echiche mbụ ọ dịghị njọ ma ọlị.
Zaghachi na 555ino
Servo: otu esi eji igwe eji eme ihe na Arduino
Potentiometer: ihe niile ị kwesịrị ịma